Chii chinonzi kushambadzira nhare? | ECommerce nhau
Chii chinonzi kushambadzira nhare?
Jose Ignacio | | Marketing, Kushambadzira kwenhare
Ehe, pane nzira dzakawanda dzekusvika kushambadzira mukati meiyo e-commerce indasitiri. Kunyangwe imwe yeanonyanya kushanda ndeyekuti inouya kubva kuchinhu chakakosha sekushambadzira nhare. Asi isu tinonyatso kuziva here kuti izwi iri rinosanganisira chii? Zvakanaka, zvinofanirwa kujekeswa nekuti zvinogona kudaro basa guru yevashandisi kubva zvino zvichienda uye nezvikonzero zvakasiyana izvo isu tichajekesa.
Kushambadzira nharembozha seti yehunyanzvi uye mafomati ekusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi uchishandisa nharembozha senge yekutaurirana chiteshi Iyo inozivikanwa zvakare sekushambadzira kwenhare uye izwi iri rinojekesa izvo zvinangwa zvako zvechokwadi mubazi iri rekugadzira iro rinomiririrwa ne zvitoro kana zvitoro. Kubva pane ino maonero, pachave nemipiro mizhinji iyo ino chaiyo chaiyo yekushambadzira system ichatipa.
Kuzadzisa zvinangwa zvedu mukati meanonzi mafoni kushambadzira zvichave zvakakosha kuti kubva pakutanga isu takajeka nezve dzimwe nzira dzekutanga. Imwe yacho ndeyekuti ichave yakakosha kune tsanangura patsva uye gadzira hukama hutsva nevatengi vedu mbozhanhare. Saka kuti iwe ugone kuenda kubva mukutendeuka kubva kuchitoro chechitoro kuenda kune yepamhepo imwe. Nenzira yakagadziriswa uye yakaenzana inogona kubatsira zvido zvemapato ese ari chikamu cheichi chakakosha maitiro.
1 Kushambadzira kwenhare: mamiriro emusika
2 Kubatsira kumakambani kubva kune ino nzira yekutengesa
3 Mikana yekuzivisa Kushambadzira Kwenhare
4 Mitemo yekushandisa iyi nzira yekutengesa
Kushambadzira kwenhare: mamiriro emusika
Chidzidzo chekuchangoburwa chakaburitswa neIAB Spain chinopa data dzinogona kuve dzinonakidza kwazvo nezveMobile Kushambadzira kuSpain uye inoratidza kushandiswa kukuru kweinternet kubva kune nhare mbozha mugore rekupedzisira. Kwete chete kubva parunhare mbozha, kana zvisiri kubva kune mamwe matekinoroji epamberi, senge piritsi kana zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi zvine maitiro akafanana.
Izvi zvinoratidza kuti 78% yevashandisi veSpanish vanoongorora email yavo kubva kunharembozha yavo. Asi chii chakanyanya kukosha, 58% yevashandisi vanobvunza nharembozha yavo kuti vawane rumwe ruzivo vasati vaenderera nekutenga mune yakasikwa. Ndokunge, simba rayo mukusarudza fomati yekutenga iri kuwedzera kuitisa mukirasi ino yematanho ekutengeserana kwezvigadzirwa zvedu, masevhisi kana zvinyorwa.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kwazvo kukoshesa chokwadi chekuti kutora mukana wepa online chiteshi hakugone kutariswa sematanho emangwana, asi pachinzvimbo chiripo chekutengesa kwedigital kana online. Kubva pane iyi nzira, zvakakosha kwazvo kuchinjira kune nyowani zvazvino mutengi zvinodiwa. Uye chii chakanyanya kukosha panguva ino: gonesa kugona kwako kuti ukudziridze zvishoma nezvishoma uye pamusoro pemakore mashoma apfuura.
Kufanana neyakavanzika yechokwadi yekuonekwa kwema mobile application mukirasi iyi yemabhizinesi. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti izvi zvinoshandiswa zvinofarira mufananidzo wekambani wehunyanzvi kana, mune mamwe mazwi, kusimudzira kuvandudzwa kwechiratidzo chekutengesa. Nemhedzisiro yakawanda inogona kucherechedzwa mune yako yemagetsi commerce kubva ikozvino zvichienda mberi, senge iwo atinozo kufumura pazasi:
Inogonesa kushanda kwechiratidzo kana yekutengesa femu.
Izvo zvinobatsira kudzikisira mitengo yezvivakwa zvemakambani edhijitari aya.
Ivo vanosimudzira kutengesa kuburikidza nehuwandu hwakawanda hwakasiyana nzira dzebhizinesi.
Uye sechirevo chekupedzisira, hazvigone kukanganwika kuti kuvepo kwemakambani aya kunopihwa kuoneka kukuru.
Kubatsira kumakambani kubva kune ino nzira yekutengesa
Kutengesa nharembozha inzira yekuvandudza hukama pakati penzvimbo yedhijitari nevatengi kana vashandisi. Kune iyo poindi iyo inopa mitsva mirau yezviito zvinogona kuve zvakanaka kune vese vamiririri vanobatanidzwa mune ino yekutengeserana maitiro. Mupfungwa iyi, haigone kukanganikwa panguva ino kuti kupindira kwenhare kwakachinja iyo kushandisa tsika, kwete nyika asi pasi rose. Nemipiro yakakodzera seinotevera:
Kana danho rekushambadzira repasirese ragadzirwa, unogona kuseta vateereri vako uye nekugadzira mushandirapamwe wechimwe chikamu, kubva pakukwezva kusvika pakutendeuka.
Kana iwe uine dhatabhesi yakanaka, iwe unogona nani kugadzirisa hukama. Kusvikira pakuti pakupedzisira iwe unogona kuwedzera huwandu hwekutengesa kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu, kunyangwe kubva pamatanho asina kufungidzirwa mumakore mashoma.
Ehezve, iwe unofanirwa kuongorora kuti iri isingadhuri sisitimu pane kushambadzira kwakawanda uye nekudaro inogona kuve yekuvandudza uchienzaniswa neiyo dzoka zvirinani pane investimenti. Ndizvozvo, uye kuitira kuti uzvinzwisise zvirinani, iri sisitimu inobatsira kubva pakuona kwezvehupfumi.
Kana ino mushambadzi system ichizivikanwa nechimwe chinhu, iri nekukwira kwayo kukuru, kana chii chakafanana, inogona kusvika kuvanhu vazhinji uyezvezve kupfuura kuburikidza neyechinyakare kana echinyakare mamodheru.
Mukati mekuvandudza kwehunyanzvi hweruzivo midhiya, imwe yeakanyanya kufanira maficha ndeyekuti inosanganisira yakakura uye yepamusoro chiyero uye a yakakwira hutachiona kugona. Ichi chinhu chinosiyanisa kushambadzira kweMobile kubva kune mamwe mamodheru ane maitiro akafanana.
Uye pakupedzisira, sechinhu chitsva, inobvumira avo vanofarira iyo inonzi geolocation. Izvi mukuita chinhu chakajeka sekupa ruzivo rwakadzama uye rwakazvimiririra kune vatengi kana vashandisi.
Mikana yekuzivisa Kushambadzira Kwenhare
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo mukati memusoro uyu ndeye mareferenzi ekuti ungaite sei ino nyowani yekushambadzira system. Mupfungwa iyi, sezvauri kuzoona, migero yaunogona kushandisa kubva ikozvino zvichienda zvakasiyana. Zvimwe zvine hunyanzvi uye zvimwe zvetsika, asi izvo muzviitiko zvese zvinozadzisa chinangwa chimwe: vanoshumira ku taura iyi yekutengesa chiteshi. Semuenzaniso, kuburikidza nezviridzwa zvinotevera zvatinokufumura pazasi:
Izvo zvakapusa uye zvishoma zvine hungwaru zvezvose mameseji mameseji uye kubva pane izvi iwe unogona kuendesa zano iri mune dhijitari commerce. Iyo yakavhurika kune ese ma profiles emushandisi uye uku ndiko kubatsira kwayo kukuru pamusoro pemamwe mafomati epamberi.
Email: ine hunhu hwakafanana neiyo yapfuura, kunyangwe ichipa imwe misiyano yepfungwa. Iyo ine mukuda kwayo kuti vazhinji vevashandisi verenga maemail avo kuburikidza nhare mbozha. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti mameseji asvike kune avo vanogamuchira, kunyangwe nekushandisa kwemamwe mafirita kuve nechokwadi chechokwadi chavo chinangwa.
pasocial network: ndiyo yazvino maitiro ekuzadzisa mhedzisiro yakanaka kuburikidza nesystem ino. Hazvishamise kuti kuvapo kwevashandisi murudzi urwu maforamu enhau kuri kukura uye kuri kuitika gore negore. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kugadzira zvemukati zvakagadzirirwa kune yega yedhijitari chikuva uye nekudaro mameseji akagadzirirwa kune chimwe chikamu cheichi chiitiko. Uine mikana yakawanda yekudyidzana netarisiro yepamusoro yekubudirira muzvinangwa zvaunoteedzera kubva zvino zvichienda mberi.
Zvimwe zvigadzirwa zvemberi- Izvo zviri mufashoni nemaitiro azvino mukushambadzira kwazvino uye ivo kashoma kuputika nepakati nesimba rakadai. Ehezve, iri imwe sarudzo inowanikwa kumakambani edhijitari kuzadzisa zvinangwa zvavo nekukurumidza. Naizvozvo, iwe hausisina zvikonzero zvekusazvigumira pakufunga nezve nharembozha chete. Kune hupenyu hwapfuura ivo.
Geolocation: Iyi imwe nzira inobvumidza vanamuzvinabhizimusi muchikamu ichi kuti vasvetuke mimwe mitemo inorambidza kutumira mameseji akakodzera panguva yakakodzera uye munzvimbo yakakodzera. Iko kwaunogona kana kutumira ako vatengi ruzivo nezve zvigadzirwa kana masevhisi, zvinopihwa zvacho kana chero chinhu chinokanganisa zviitiko zvebhizimusi rako chirongwa. Kubva pane imwe nzira yakasarudzika kubva kune yakasara.
ApplicationsUnogona kusazviziva panguva ino chaiyo, asi iko kushanda kwetekinoroji kune zvakawanda zvakawanda zvakanaka kupfuura zvaunofunga pakutanga. Kusvika pakuti ivo vanokutendera iwe kuti uchengetedze chiyero chinofungidzirwa chekudyidzana nerimwe bato iro riri chikamu cheichi chiitiko.
Mitemo yekushandisa iyi nzira yekutengesa
Sezvaungave iwe waona, zvishandiso zvacho zvakawanda uye zvichave zvinoenderana neako wega hunyanzvi zvido. Iko kwechokwadi kushambadzira nhare kunofanirwa kuve chikamu chehurongwa hwekutengesa Marketing zvimwe zvepasi rose. Kuti uwane zvinangwa zvishoma kuburikidza nekugadzirwa kwechirongwa chakanakisa chinokanganisa chitoro chako chepamhepo.
Chimwe chezvinhu zvacho zvakakosha chinogara mukuti iwe unenge wave mumamiriro akakwana kupatsanura vatengi vako kana vashandisi. Nekuvhurwa kwemushandirapamwe uyo uchave nechinangwa chekukwezva kutendeuka. Rinenge risiri basa rakareruka, asi nekuedza kushoma uye nedosi yekuraira iwe unowana mhedzisiro, zvirinani mukati yepakati nepakati. Nekuti iri pakupera kwezuva iro nderei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » Chii chinonzi kushambadzira nhare?
Contextual kutenga: chiitiko chitsva chekutenga
Nei uchiisa mari muUX?